.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Wanted – တစ်ယောက်တစ်နေရာ မှ
Wanted – တစ်ယောက်တစ်နေရာ မှ
Wanted ရဲ့ သီချင်းတွေကို ကြိုက်တဲ့ အနော့်ချစ်သူအတွက် တစ်ယောက်တစ်နေရာ မှ ဆိုတဲ့ Album အသစ် လေးကို
နားထောင်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာဒေါင်းပြီး ပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။ Mp3 သီချင်းတွေ တင်ပေးနေတဲ့
ဆိုဒ်အားလုံးနီးပါးပဲ သီချင်းတွေကို Audio Bitrate မူရင်း 128 kbps နဲ့ပဲ တင်ပေးကြတာများပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့
Flash Song လုပ်သူ တော်တော်များများပဲ သီချင်း ဆိုဒ်သေးအောင်လို့ Audio Bitrate ကို 64kbps နဲ့ ချုံ့ကြတာပါ။
အဲဒီတော့ လိုင်းမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက် လိုင်းပေါ်မှာ နားထောင်ရတာရော ၊ ဒေါင်းယူရတာပါ အဆင်ပြေပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြားပဲ ဒီနေ့ တွေ့လိုက်တဲ့ဆိုဒ်ကတော့ Audio Bitrate မူရင်း 128 kbps ကို 192kbps ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး
တင်ပေးတာ တွေ့တော့ မျက်လုံးပါ ပြူးသွားတယ်။ သူတင်ပေးတဲ့ သီချင်း ၁၁ ပုဒ်က 96 MB တောင် ရှိနေပါတယ်ဗျာ။
အဲဒါနဲ့ YouTube မှာ တစ်ပုဒ်ချင်း သွားရှာပြီး .3gp 144 နဲ့ ဒေါင်းပြီး Mp3 သီချင်းဖြစ်အောင် Convert ပြန်လုပ်ရတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အားလုံးကို Audio Bitrate 64kbps နဲ့ ချုံ့တင်ပေးထားတာဖြစ်လို့ ၁၁ ပုဒ်ကို 22 MB ပဲရှိပါတယ်။
အောက်မှာ Wanted ရဲ့ တစ်ယောက်တစ်နေရာ မှ သီချင်းတွေကို နားဆင်နိုင်သလို ဒေါင်းယူမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါပြီ။
1 နံပါတ်တစ် Click Here Click Here 1.70 MB
2 ဝေးခဲ့ရင် Click Here Click Here 2.16 MB
3 အမှတ်မရှိ Click Here Click Here 2.26 MB
4 နေမထွက်တဲ့ကမ္ဘာ Click Here Click Here 1.86 MB
5 ငါ့ကုသိုလ်ကံ Click Here Click Here 1.82 MB
6 ခွင့်လွှတ်ထားပါတယ် Click Here Click Here 2.61 MB
7 ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ် Click Here Click Here 2.00 MB
8 ပြန်တွေ့ရင် Click Here Click Here 2.19 MB
9 တစ်နေ့တော့ရောက်မယ် Click Here Click Here 1.86 MB
10 ခေါင်းစဉ်မတပ်ပါ Click Here Click Here 1.81 MB
11 မိုက်မဲသူ Click Here Click Here 2.23 MB
Posted by Thurainlin at 13:14